ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သင့်ထံမှချိန်းတွေ့အကြောင်း Learn နိုင်သလားအမှုအရာ 50 Grey က၏အရိပ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ & လိင်
5 သင့်ထံမှချိန်းတွေ့အကြောင်း Learn နိုင်သလားအမှုအရာ 50 Grey က၏အရိပ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 23 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အစဉ်အဆက် Grey ကငါးဆယ် Shades ကြား၏? အဖြစ်မှအမျိုးသားအပေါင်းတို့လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ထူးခြားဆိုးအကျင့်တို့နှင့်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်နေစဉ်, ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်ကအမှန်တကယ်လည်းမရှိ. ကသာရနိုင်ပါသည်? တကယ်တော့, ဟုတ်ကဲ့. ဤစာအုပ်သည်အလိုဆန္ဒပုံနဲ့သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်, ဆွဲဆောင်မှု, လူ့စိတ်ပညာမှတစ်ဆင့်ချစ်တဲ့မေတ္တာ. တကယ်တော့, တကယ်တော့တစ်ဦးချိန်းတွေ့သမ္မာကျမ်းကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်. စိတ်ဝင်စားကြသည်? Grey ကငါးဆယ် Shades ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းသင့်ကိုသွန်သင်တော်မူနိုင်သည့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေအပေါ်ဖတ်ရန်.
သင်ခန်းစာ #1: single-Mind အာရုံစိုက်
ခရစ်ယာန်, အဓိကအအထီးဇာတ်ကောင်, Anastasia လိုလား, သူရဲကောင်း. သူသည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အလွန်အမင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို. အခြားအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးများအရုပ်ပုံဝင်သောအခါမိမိအအာရုံစိုက်နှင့်လိင်စွမ်းအင်သွားအောင်ပါဘူး. မိမိအဘဝါးအာရုံစိုက်သာ Anastasia နှင့် Anastasia ပေါ်.
ဒီအာရုံကိုအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းယောက်ျားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှမရေစိတ်ဝင်စားမှုပေးဘို့ကအဆင်ပြေကြောင်းပြောပါတယ်အဖြစ်များစွာသောမိန်းမဖို့အလွန်အမင်းသေရည်သေသည်. စိတ်ပျံ့လွဖျက်သိမ်းရေးကိုအပြည့်အဝမျက်လုံးချင်းပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်နေ့စွဲကိုသင်တခဏခြင်းတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းသင့် connection များနှင့်ပြပွဲပိုမိုနက်ရှိုင်းရန်အထောက်အကူပြုမည်.
သင်ခန်းစာ #2: Driven နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ
အမြဲတမ်းအမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်, ခရစ်ယာန်စွမ်းရည်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကျယ်ပြန့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်သည်. သူကလည်းအဆက်မပြတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်မိမိကိုမိမိကိုစိန်ခေါ်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်နည်းလမ်းရှာ, သူမနေပါစေကဖြစ်ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုခရစ်ယာန်နှင့်အတူသူမ၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းပြီးဆုံးသည့်အခါ Anastasia မယ့်တူ.
ကမဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်ပေမဲ့, အောင်မြင်သောနေသောထဲကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးရှိပါတယ်, အသိဉာဏ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမထိုက်မတန်. နေ့စဉ်တိုးတက်မှုနှင့်စိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘဝနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအလားတူမိတ်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်.
သင်ခန်းစာ #3: အန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်းငှါဆန္ဒရှိခြင်း
အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကြိတ်နှင့်ပြည့်စုံသောအသက်တာအသက်ရှင်နေထိုင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက်သို့အရာအားလုံး ယူ. ဆက်ခံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခရစ်ယာန်ဦးဆောင်သည့်. သူပထမဦးဆုံးမှာပိတ်ပုံနေစဉ်, သူကဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဤလောကသို့ Anastasia ပေးနိုင်ပါတယ်နှင့်သူမ၏သူ့ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပေးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏အကျင့်စရိုက်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်လာ.
Anastasia, အပြစ်မရှိကြောင်းနှင့် Self-အသိစိတ်နှင့်ပြည့်စုံနေစဉ်, သူမဆိုတဲ့အချက်ကိုတွင်ခရစ်ယာန်ချင်တယ်မဆုံးဖြတ်. နှင့်သူ၏ကမ္ဘာ့သူမ၏မှလုံးဝအမည်မသိနှင့်အသစ်ဖြစ်၏နေစဉ်, သူမကသူနဲ့သူ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဘက်လျက်.
သောကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အားနည်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်သောအယူအဆ၏, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြအပေါ်သို့လန်ဒီသိတယ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့, စိတ်ခံစားမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်လုပ်ဖို့အင်အားအကောင်းဆုံးအမှုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. အခြားတပါးသင်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ယုံကြည်မှုအဲဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ရှုခွင့်ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းဖို့ခွင့်ပြု.
သင်ခန်းစာ #4: ဆုံးဖြတ်ချက်
ခရစ်ယာန်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်သူသိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူအမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းကိုတက်နေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်အသက်တာ၏ထွက်ချင်တယ်, သူအမှန်တကယ်မိမိကိုယ်ကိုသိတဲ့အတွက်. ထိုသူသည် Anastasia ချင်သောဆုံးဖြတ်သောအခါ, တကယ်တော့အရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်.
ကုမ္ပဏီဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချ, စိတ်အားထက်သန်လျှက်နှင့်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်, ကြိုတင်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့ဆက်သွယ်ခြင်းများအပြင်၌သင်တို့၏ရက်စွဲများဦးဆောင်ခံ့ရည်ရွယ်ချက်များရှိလာအောင်ကူညီပေးပါတယ်. ၎င်းသည်သင့်အားသင်တစ်ခုတည်းကိုသာလိုချင်နှစ်သက်ကြသည်ကိုသိရဖို့အမြဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
သင်ခန်းစာ #5: ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ထိခိုက်, နှင့် Unapologetic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire
ကြိုတင်ခန့်မှန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှသေခြင်းအရာသည်. ခရစ်ယာန် spanking မလိုက်သောအခါ, ရိုက်, သို့မဟုတ် Anastasia တက်ချည်ထားခြင်း, သူကိုင်ထားသည်, caressing, နှင့်သူမ၏နမ်း. ခရစ်ယာန်အားကောင်းနေ, ပျော့ပျောင်း, ရန်လို, မွှေးရှိသမျှတို့သည်အစဉ် unapologetically Anastasia လိုလား. ထိုအလှည့်တွင်, Anastasia သူ့အာရုံစိုက်မှုကိုနှင့်ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုချစ်ပြီးအလွန်တပ်မက်စိတ်ဓါတ်တွေရလာစေတယ်.
လိင်ကရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းကူညီပေးပါမည်. မေတ္တာရှင်, complimenting, နှင့်သင်ဂရုစိုက်ရုံဘယ်လောက်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ပျော်ရွှင်ပြပွဲလုပ်လိုသော. key ကိုသင်ဖြစ်ချင်တယ်ကြောင့်သင်သည်ကောင်းသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသရန်ဖြစ်သည်.
တစ်ဦး Kiss ၏အဓိပ္ပာယ်